Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia oo ka wadahadley iskaashiga dhaqaalaha labada dal iyo gobolka | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia oo ka wadahadley iskaashiga dhaqaalaha labada dal iyo gobolka
Apr 17, 2016 - jawaab
Bahir Dar, 17 April 2016: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Ethiopia, Hailemariam Desalegn ayaa maanta kulan ay kaga hadlayaan iskaashiga labada dal ku yeeshay magaalada Bahir Dar ee dalka Ethiopia.
Labada hoggaamiye ayaa dhinacyada siyaasadda iyo amniga ka sokow si qota dheer uga wadaxaajooday iskaashi dhaqaale oo dhinacyo badan oo labada waddan dhex mara.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankaasi ka soo jeediyay fikir ku saabsan in labada dal ay abuuraan guddi iskaashi oo heer wasiir ah, iyadoo taladaasina uu soo dhoweeyay Ra’iisul Wasaare Desalegn.
Labada dal ayaa ka wada shaqeyn doona horumarinta barnaamijyada mihnadaha iyo shaqo abuurka, maalgashiga, beeraha, tiknoloojiyadda iyo arrimaha bulshada.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaare Desalegn ayaa waxay kaloo ka wada hadleen suuragalnimada in waddamada Geeska Afrika ee kala ah Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti iyo Suudaan ay sameystaan suuq ganacsi oo ka shaqeeya kobcinta dhaqaalaha.